Naya Post Nepal | कस्को प्रेममा छिन् रियाशा दाहाल ? खु’ला’इन् सबै कुरा (हेर्नुहोस भिडियो)
कस्को प्रेममा छिन् रियाशा दाहाल ? खु’ला’इन् सबै कुरा (हेर्नुहोस भिडियो)
काठमाडौं २ माघ – पछिल्लो समय रियाशाको चर्चा चुलिदो छ । काठमाडौँकी रियासा दाहाल ‘कलेज नेपाल’ शीर्षकको युट्यु’ब च्यानलले जन्माएकी प्र”ति’भा हुन् । समसामयिक विषयमा भिडियो बनाउने यो च्यानलमा जीवेश गुरुङसँग जोडी भएर उनले
थुप्रै लघु फि’ल्ममा अभिनय गरेकी छिन् । केहि मनमुटावका कारण उनिहरूको जोडी छुट्टीएपनि उनको चर्चा भने कुनै कमी छैन । व्यवस्थापन विषयमा स्नातक उनले दर्जनभन्दा बढी म्यु’जिक भिडियोमा काम गरेकी छिन् । हिरोइन बन्ने लक्ष्य नराखेकी रियासा सुहाउँदो भूमिका भए
फिल्ममा अभिनय गर्ने सो’चमा छिन् । उनि सामाजिक संजालमा पनि उत्तिकै सक्रिय छिन् । उनले सामाजिक संजालम निकै सु’न्दरत तस्बिर शेयर गरिरहेकी हुन्छिन् । भिडियो हेर्नुहोस् ।
पछिल्लो समय फुलहरूको बिचमा लिइएका सुन्दर तस्बिर शे’यर गरेकी छन । जहाँ उनि फुल जस्तै सुन्दर देखिएकी छन् । हेराै सामाजिक सं’जाल’बाट लिइएका केहि थप तस्बिर-
२०७८ माघ २, आईतवार प्रकाशित 1 Minute 297 Views